Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013) | MM Movie Store
ဒီဇာတျလမျး ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှဈကထှကျရှိထားတဲ့ Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame ရုပျရှငျရဲ့ Prequel ဖွဈပါတယျ …ဒါကွောငျ့ စုံထောကျတီ(ဒီး)ကိုငယျစဉျဘဝကပုံစံနဲ့တှရေ့မှာပါ။
မငျးသား Mark Chao ကစုံထောကျတီ(ဒီး)အဖွဈပါဝငျထားပွီး မငျးသမီးကတော့ Angelababy ဖွဈပါတယျ။ ကိုရီးယားမငျးသား Kim Bum လဲအရံပါဝငျထားပါတယျ။တီ(ဒီး)တဈယောကျ စုံထောကျမဖွဈခငျ အလုပျလာလြှောကျကတညျးက တိုငျးပွညျရဲ့ သရေေးရှငျရေးပွသနာတဈခုကို ဖွရှေငျးဖို့တိုကျဆိုငျလာတဲ့အခါမှာ……..။
ဇာတျလမျးကတော့ အဆနျးကွီးဖွဈပွီး နဂါးတှေ အဆိပျကောငျတှေ ကိုယျဖော့သိုငျးတှေ ရထေဲသှားမွငျးတှေ လြှို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ကွညျ့ရမှာပါ။ဒီဇာတျလမျးကို ကြှနျတျောကတော့ ကွိုကျပါတယျ။ ကငျမရာရိုကျခကျြတှေ Special Effects ကလဲ ကွညျ့ရှုသူတှကေို တဝိုးဝိုးဖွဈရမှာပါ….
ဒီဇာတ်လမ်း ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame ရုပ်ရှင်ရဲ့ Prequel ဖြစ်ပါတယ် …ဒါကြောင့် စုံထောက်တီ(ဒီး)ကိုငယ်စဉ်ဘဝကပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာပါ။
မင်းသား Mark Chao ကစုံထောက်တီ(ဒီး)အဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး မင်းသမီးကတော့ Angelababy ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားမင်းသား Kim Bum လဲအရံပါဝင်ထားပါတယ်။တီ(ဒီး)တစ်ယောက် စုံထောက်မဖြစ်ခင် အလုပ်လာလျှောက်ကတည်းက တိုင်းပြည်ရဲ့ သေရေးရှင်ရေးပြသနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းဖို့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာ……..။
ဇာတ်လမ်းကတော့ အဆန်းကြီးဖြစ်ပြီး နဂါးတွေ အဆိပ်ကောင်တွေ ကိုယ်ဖော့သိုင်းတွေ ရေထဲသွားမြင်းတွေ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ကြည့်ရမှာပါ။ဒီဇာတ်လမ်းကို ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ ကင်မရာရိုက်ချက်တွေ Special Effects ကလဲ ကြည့်ရှုသူတွေကို တဝိုးဝိုးဖြစ်ရမှာပါ….
(Media Fire) Large Size ~ Download